Indlela yokuqhawula izibhothi zakho ze-Ski ngokufanelekileyo
Indlela yokukhupha izibhobho ze-Ski
I-Boot Buckling Iingcebiso ze-Skiers
Nabo bahamba phambili beqaqabana baxhatshaza ngeenqindi zabo. Nangona iibhotshi ze-ski ezifanelekile akufanele zibe yintlekele ukuba ziqhubeke, wonke umntu unaloo mihla xa amabhoti abo asayi kukhwela ngokufanelekileyo. Sonke sibonile i-skier evuthayo ngokukhawuleza iqubuzela unyawo lwakhe kwi-boot engabonakaliyo kwi-lodge ye-skige, kwaye ke, umzali okhungathekileyo uzama ukukhawuleza ukunqanda umlenze onqeni lomntwana. Ngethamsanqa, ukuba amanyathelo afanelekileyo athatyathwa, ukubeka iibhotile ezinqabileyo akumele kube yinkqubo enzima kangaka.
Emva kwakho konke, akukho mntu ufuna ukuchitha yonke amandla ngaphambi kokuba atshaye iindawo ezithambileyo. Nazi ezinye iingcebiso malunga nokufumana iibhothi zakho ngokulula, ngoko unokuchitha amandla akho kwidayimnyama emnyama, kwaye kungabi ngeebhotshi ze-ski.
Qiniseka ukuba izibhobho zakho zifakwe ngokufanelekileyo
Ngaba sele uvile lo mzila izihlandlo zezigidi, kodwa ukugqoka amabhuthi afanelekileyo kubalulekile. Iibhothi ezihambelana ngokufanelekileyo akufanele zibe yintlungu eninzi ukuba iqhubeke, kodwa iibhuthi ezikhululekile ziyakwandisa usuku lwakho lwekhefu (khumbula ukuba kufuneka uyibize imini ngenxa yeenyawo ezinzima) kwaye inokukunceda ukuba uphumelele ubuchule bakho, . Kubalulekile ukuthenga izibhothi zakho ze-ski kwi-shop ye-ski eyaziwayo eya kukukhokelela kwinkqubo yokufumana i-boot esebenza ngonyawo lwakho, i-ankle kunye nethole. Kubalulekile ukuzama iibhothi ngaphambi kokuba uthenge, kwaye qi ni kezele ukuza kunye neesibini zeesitembu kwisitolo se-ski ukugqoka xa uzama kwiebhuthi.
Cinga ngokutshala imali kwi-Boot Custom
Ukuze ulungele ukulungelelanisa, cinga ukuthenga ama-footbeds neziko kunye neziko lokukhupha i-ski boot eziza kukunika inkxaso apho ufuna khona kwaye ulungelelanise kakuhle umzimba wakho kwisigaba se-ski.
Gcina ixesha elifutshane kunye nemali ekuthengeni i-boot ekhululekile ekulungeleyo-ngokuqinisekileyo kuwufanele.
Gqoka iisokhi ezenzelwe ukuSuka
Ukuba usenxibe iisokisi ezilukhuni zeeboyile, lixesha lokubagxotha. Iisokisi ezinamaqabunga ezinqabileyo zinyuka kunye ne-lumpy phantsi kweebhothi ze-ski, kwaye zithatha ixesha elide ukuba zome, ngoko ke ukuba iinyawo zakho zithuthuka, unokuphela ngeenyawo ezibandayo kulo lonke usuku lwe-ski.
Uboya be-soft-blend ski socks banakekele le ngxaki. Iisokisi zemixube ye-Synthetic nazo zikhethiweyo ezilungileyo kakhulu, zininzi zenzelwe ukubonelela ukufudumala ngelixa zicima umthamo. Iisokisi ezenzelwe ukukhwela i-skiing nazo zidibene nomlo weenyawo zakho, ngoko ziya kulungelelanisa kwaye zivumele i-ski boot yakho idibanise ngokulula.
I-Flex Iinyawo Zakho Ngaphambili Nangona Ubhekisa I-Boot
Xa unyawo lwakho lusebhokisini, ngaphambi kokuba uqhube nantoni na, hlengisa i-ankle yakho kunye nethole phambili njengoko ungathanda ukuba uyasasa. Ezi nkomfa i-ankle yakho ngasemva kwebhokisi kwaye ikhusela i-shin yakho ngokubhekiselele kulwimi lwebhokisi, ekusibeka ngokuchanekileyo kwi-ski stance.
Gcina i-Strap Power phambi kwe-Buckling
Lungisa umgca wamandla ukuze ulwimi lwebhokisi luhambelane ngokubhekiselele kwi-shin ngaphambi kokuba uqhube nantoni na. Oku kuya kuphelisa ithuba lokungaphezu kweendawo eziseleyo kwi-boot shaft. Qinisekisa ukuba intambo iyanqanda, kodwa ingabi nzima, njengokuba i-pinching igxotha ukujikelezwa, okubangelwa ngamanzi abandayo.
Khusela i-Buckle yokuqala ye-Vertical Low
Ukuba unamabhakethi amabini kwinqanaba elincinci lebhokisi lakho, qiniseka ukuba uqhube okwesibini ukusuka phezulu phezulu ngaphambi kokuba wenze nayiphi na i-buckles (ibhokhwe elisondeleyo kwinqanawa yakho phezulu kwinqwelo).
Ukuba unamathambo amathathu kwinqanaba elincinane lebhokisi lakho, ngoko-ke inkunzi efuna ukuyifaka kuqala iya kuba yowesithathu ukusuka phezulu. Le yiyona nto ibaluleke kakhulu, kwaye kufuneka ikhuseleke ukwenzela ukuba ubambe unyawo lwakho kwaye ubuyele emuva, kwaye vumela u-shin wakho ukuba aguqule phambili phambi kwebhodi ngaphandle kwegumbi eligqithiseleyo.
Emva koko, Gcina ii-Top Buckles
Iimfumba eziphezulu kwinqanaba eliyiyo lebhokisi lakho kufuneka lizinze, kodwa kungekhona njengento eqinile njengamaqhekeza angama-ankle okubhekiselele ngasentla. Qinisekisa ukuba unyawo lwakho lunokuthi luqhube phambili luhamba phambili kunye nebhokisi, kunokuba uhambe ngokukhululekile kwi-boot. Ufuna i-boot ngokwayo ukuba iguqule phambili kunye nethole lakho, kunokuba ithole lakho lihambele ngaphakathi kwe-shaft shaft.
Musa ukulibala iimfumba
Qinisekisa ukuba izibhakane zeetonki zihlala zihamba kakuhle.
Ngamanye amaxesha abantu bayakulibala malunga nalezi zinto baze bawashiye kwi-notch yokuqala, kodwa kufuneka bakhuseleke ukubeka inxalenye enkulu yeenyawo zakho endaweni.
Cinga ngokusebenzisa i-Boot Buckler ngoNcedo olongezelelweyo
Inkampani yeThuluzi le-Ski yenza "i-Multipurpose Boot Buckler ne-Carrier" ekuncedayo ukuba unqabise ibhokotshi yakho yebhokisi, kwaye usebenza njengendlela yokukhupha i-boot carrier. Nangona akufanele usebenzise le sixhobo ukukhupha izibhothi zakho ngokungenakunzima, kunokukunceda ngeenkonkxa ezigqithisiweyo kwaye unike iminwe yakho ikhefu. I-boot buckler iyanceda nakwabantwana abazabalazela ukukhupha izibopho zabo.
Ukuba kuyimfuneko, Hlaziya kwakhona iStrip Power
Khangela kabini umgca wamandla emva kokuba ulungelelanise iimfumba ukuze uqiniseke ukuba i-boot iyancipha kwaye ikhuselekile unyawo lwakho.
Emva kokuba iibhotshi zakho zihlulwe, zivavanye ngaphandle kokuvavanya. Ungesabi ukulungelelanisa iimfumba zakho emva kweli gumbi lokuhlola. Unokufumanisa ukuba iibhothi zakho zithukulule yonke imini, ngoko kufuneka ulungele ukulungiswa ngexesha lokuphumla kwakho kwasemini. Xa uqala ukuhamba ngesidlo sasemini, ukukrazula iinqwelo zakho kunokunika iinyawo zakho ithuba elihle, kodwa ukuba unomuvo wokuthi kufuneka uhlehlise iinqwelo zakho rhoqo xa ufika kwi-ski lift, kunokube neengxaki ngendlela iibhothi zakho ze-ski . Khumbula - iibhotshi zakho ze-ski akufanele zenzeke kakubi! Ukuba uchithe ixesha elide udlala ngeentlobo ezahlukeneyo kunye neebhotile zakho zisakunceda, zithathe kuyo nayiphi na ivenkile ye-ski okanye i-shop boot eyaziwayo.
Isikhokelo somthengi wezambatho ze-Skiing
Indlela yokugubha iikrampon zakho
Ukukhangela i-Back Ignite Driver esuka kwi-Nike Golf
Ukuchaza 'Uludwe lweeNqwelo zabaqhubi' kunye 'nabaqhubi abangekho mthethweni'
I-Belay ne-Rappel Devices
I-Lin Boot Liners
Ukudibanisa i-Wedges: I-Intro ye-Golf Beginners
Iingcamango zeProjekthi yeSayensi yeBakala yeSikolo seBakala
Iilwimi zesiTaliyane: iiMarsi
Imfazwe Yehlabathi II: iPhabliki P-47 I-thunderbolt
I-Paleoenvironmental Reconstruction - Yayiyintoni Imozulu Kwangaphambili?
Inkcazo yoLwazi oluPhezulu
Indlela yokusebenzisa iifrimpyutyambo zesiThakabhaka kuMicaka
UKUQHUBEKA: KwiiNtloko - UkuBhala kwe-Albhamu ye-Cast Cast yasekuqaleni
UJoseph Louis Lagrange Biography
'I-Delirium ehambelanayo': Yintoni eyanyanzela ababhali ukuba babhale?
Iyintoni iholide yamaYuda ePurim?
Imfazwe YaseMerika: iMandla Jikelele uEdmwin V. Sumner
IiYunivesithi eziPhambili eMelika ngo-2018
Neverland Ranch, Ikhaya leMbali likaMichael Jackson